Ungawusebenzisa njani uMda okanye ezinye iZiphumo kuMfanekiso kwiSilayidi sePowerPoint
Ungatsalela ingqalelo kwimifanekiso ngokongeza imida, izithunzi, kunye nokubonakalisa kwimifanekiso kwizilayidi zePowerPoint. Ukuba ufake imilo yePowerPoint emfanekisweni, umda usetyenziswa kubume. Ukufaka umda kumfanekiso:
Khetha iFomathiIifayile zeFotoUmda weMifanekiso kwiRibhoni.
Oku kutyhila imenyu yeMida yeMida.
Khetha umbala wemida, ubunzima (ububanzi bemigca yomda), kunye nephethini yeedeshi ofuna ukuzisebenzisa.
Iqhosha leZiphumo zoMfanekiso kwiqela leZimbo zeZithombe (elibekwe kwiFomathi yeThebhu) likuvumela ukuba ufake iintlobo ezininzi ezinomdla kwimifanekiso yakho. Xa ucofa eli qhosha, imenyu enolu khetho lulandelayo iyaboniswa:
Isithunzi: Kusebenza isithunzi emfanekisweni. Unokukhetha enye yeempembelelo zesithunzi ezichaziweyo okanye ubize ibhokisi yencoko yababini ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso isithunzi.
Umboniso: Yenza umfanekiso obonakalisiweyo womfanekiso phantsi komfanekiso wokuqala.
Ukukhanya: Yongeza umphumo oqaqambileyo emaphethelweni omfanekiso.
Imiphetho ethambileyo: Ithambisa imiphetho yomfanekiso.
Ujikelezo lwe3-D: Ujikelezisa umfanekiso ngendlela edala isiphumo esime ntathu.
I-ferrous sulfate vs ferrous gluconate
Ziyacetyiswa kwaye ibuprofen ziyafana
r Yongeza iilebhile kumxholo
indlela yokuzala izinja kwi-minecraft